Ntughari ọgwụgwọ & Nyocha: Prọfesọ John Whitehall | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Ndị ọrụ Victoria machibidoro igbochi usoro nyocha ndị ọzọ n'ahụ ụmụaka.
Site n’aka Prọfesọ. John Whitehall.
Gọọmentị Labour nke Victoria nọ na nhazi usoro iwu iji machibido ihe a na-akpọ 'ọgwụgwọ ntụgharị' nke ọ kọwara dị ka 'omume ma ọ bụ ọgwụgwọ ọ bụla nke na-achọ ịgbanwe, na-ebelata ma ọ bụ wepụ ụdị mmadụ nwere mmekọahụ ma ọ bụ njirimara nwoke'.
Na ihu ya, nke a ga - adị ka ihe dị mma, n'ihi nsonaazụ nke mmemme a na - akpọ 'Security School', na ebumnuche ndị ọzọ, nke, n'okpuru njigide mgbochi nke mmegide, kụrụ mkpụrụ nke nsogbu aghara aghara na Uche otutu umuaka na nkuzi ha banyere olulu di na nwunye, nke na-ekwusa na odighi udiri ala dika nwata nwoke. Usoro echiche a na-agwa onye ọ bụla nọ ebe ọ bụla na egwurugwu, na-adabere n'ụdị oge ahụ.
A ga-etorịrị gọọmentị Victoria na-ekpebi na Ngalaba Mmụta Ya enweghị ikike ịkwalite echiche nke kpatara ọtụtụ narị ụmụaka Victoria na-etinye ikike na ndị otu Ngalaba Ahụike iji wepụ njirimara nwoke na nwanyị nke chromosomes kpebiri, na ịgbanwe. ozu to kwekọrọ na echiche echiche.
Mana ọ dịghị: Gọọmentị Andrews enweghị ebumnuche ịkwụsị ozi ọma na omume nke echiche ọhụrụ. Kama nke ahụ, ya na Orwellian Newspeak, ọ bu n'obi igbochi mbọ ọ bụla 'ịgbanwe' ma ọ bụ ịtụgharị uche, nwa agbaghaghachitere na njikọ nwoke na nwanyị ya na chromosomes ya.
Enweghị irube isi na mmachibido iwu a ga-ata gị ahụhụ site na mpụ ma ọ bụ iwu obodo, ma ọ bụ ha abụọ, ma ọ bụ site na nleghara anya ma ọ bụ ọrụ. Nbanye ga-agụnye ọdịda nke onye na-agwọ ọrịa ma ọ bụ onye nkuzi iji zoo ụmụaka mgbagwoju anya na Ọrụ Gender na Royal Children's Hospital dị na Melbourne ebe ọ nwere ike ịnwe 'nkwenye' nke okike ọhụrụ site na homonụ na ịwa ahụ. Commissionlọ ọrụ gụnyere mbọ iji 'mee ka nwatakịrị ahụ nwee ntụsara ahụ na akpụkpọ ahụ ebe a mụrụ ya' site na ezinụlọ na mmekọrịta uche onye ọ bụla: usoro izizi nke mbụ nke metụtara ihe ịga nke ọma, mana ugbu a na-eleda ya anya dị ka 'ihe arụ', ọ ga-abụkwa machibidoro 'ntughari ọgwụgwọ'.
Nzọ mmachibido iwu ahụ.
A ga - achọpụta nzọụkwụ mbụ maka mmachibido 'ntụgharị ọgwụgwọ' na Victoria na Iwu mkpesa Ahụike 2017, nke ndokwa ya, ka onye isi ala Victoria Victoria mara ugbu a, Attorney General, Jill Hennessy ga - eweta ụzọ isi mesoo ndị na - erite uru site na usoro ịkpọasị nke usoro mgbanwe ndị mmekọ nwoke na nwanyị… nke na-eweta oke mmetuta mmetụta uche ma mebie ahụike nke ndị otu na - eto eto nke obodo anyị. Ọzọkwa, dị ka Ms. Hennessy si kwuo, mpụ nke usoro ọgwụgwọ ntụgharị dị oke njọ nke na ọ na-achọ 'ntụgharị ihu' nke 'achọrọ onye ebubo ka o gosipụta okwu iji guzobe, ma ọ bụ bulie ihe akaebe iji gosi, na ikpe amaghị ya. .
Nzọụkwụ nke abụọ bụ ntọhapụ, na Ọktoba 2018, nke akụkọ a kpọrọ 'Mgbochi Ọchịchọ, otingkwalite Ikpe Ziri Ezi. Zaghachi na ọgwụgwọ ntụgharị LGBT na Australia ' nke a mebere site na Lawlọ Ọrụ Iwu Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ na Victoria na Researchlọ Ọrụ nyocha Australia na Mmekọahụ, Ahụike na Society na Mahadum La Trobe, ya na onyinye sitere n'aka ndị Kọmitii maka Mmekọ na Mmekọahụ, Mkpesa Ahụike, na Ahụike Uche, yana ndị otu LGBTI nke gọọmentị na-arụ ọrụ. ọrụ aka. Ekwesiri icheta na Researchlọ Ọrụ nyocha na La Trobe bụ ọrụ dị ukwuu maka ihe a na-akpọ Mmemme Schoolslọ Akwụkwọ Nchedo, nke a kpọtụrụ aha n'elu.
Nkwupụta ahụ kpọrọ oku ka e mee ka Iwu Mkpesa Ahụike ahụ dị ike ma bụrụ ihe mmụta maka ndị ọzọ Australia: ịtụle 'nhọrọ iwu na usoro iwu iji gbochie ịkwalite na inye usoro ọgwụgwọ ntụgharị na omume ndị yiri ya, gụnyere site na okwukwe obodo na otu na ndị edepụtara aha ha abụọ. na ndị ọrụ ahụike na-edeghị aha ahụike '. Ọ na - akpọ iwu 'na - akpachapụ anya ịkagbu (ntụgharị ọgwụgwọ)'… nke na - egbochi n'ụzọ ọ bụla ma ọ bụ na - emeghị mkpesa 'ma kwupụta mkpa ọ dị' omebe iwu itinye aka iji kpuchido ụmụaka na omume ntụgharị n'agbanyeghị ọnọdụ ma ọ bụ ọkwa nke iwu '
Akuko a choro ndi okacha amara nke umu nwoke nwere nsogbu a ka ha mata nzere doro anya sitere na mmuta puru iche nke na-ekwusi ike iji nwaghari nwatakiri agbagha na njiri mara nke nwoke na chromosomes adighi ‘esoro n’oru aka oru aka ha’ nke ga-akpakwa ‘ịdọ aka na ntị. Schoolslọ akwụkwọ ga-enwerịrị asịrị ahụ. Mkpochapu na-akpọ mmefu ego.
Akuko a choro ‘mgbasa ozi ọha na eze’ na-akwalite ‘ọgwụgwọ ntụgharị’ machibidoro iwu. Nyere, ya mere, edemede a na-ekwu okwu megide mgbochi ịba ụba na ịwa ahụ n'ịkwado usoro ọgwụgwọ ọdịnala, ọ nwere ike ịbụ ụdị ikpeazụ nke Victoria!
Nkwupụta ahụ kpuchitere arụmụka ya na nkwupụta sitere na mmadụ 15 ndị ​​azaghachiri sitere na 'LGBTI dị iche iche, ndị na-agba ọsọ ndụ na ndị na-edina ụdị onwe ha' na netwọk ndị ọzọ, na-ekwubi na ọ chọtawo 'ọtụtụ ihe akaebe' nke mmerụ ahụ site na 'ọgwụgwọ ntụgharị' a rụrụ dị ka 'ọgwụgwọ ime mmụọ' dị iche iche ụlọ ọrụ okpukpe.
Ndị zara ajụjụ ahụ gbara afọ 18-59, iteghete kwuru na ha bụ nwoke na nwoke, nwoke abụọ dịka transgender, otu dị ka nwanyị na nwoke na nwanyị nwanyị, na otu dị ka ọnụọgụ abụọ. Iri na atọ ahụ sitere na Ndị Kraịst, otu onye Juu na otu Buddha.
Usoro ọgwụgwọ ahụ gụnyere ndụmọdụ mmadụ na otu, yana mkparịta ụka nke nkà mmụta okpukpe na ekpere, mana enwebeghị mmetụta n'echiche banyere ndị na-aza ajụjụ gbasara mmekọahụ. Nke ka njọ, a na-ekwu na ọ mụbara nhụsianya site na mmụba nke nkwenkwe ya na nkwenkwe ọdịnala. Yabụ, ọgwụgwọ ntụgharị bụ ihe efu, ihe na-emerụ ahụ, ekwesịrị ka amachibido ya iwu, ụka, ọkachasị ndị Christian Protestant, kwesịrị ịnabata ụdị mmekọahụ dị iche iche. Nnukwu eserese nke obe na akụkọ ahụ nọgidere na-elekwasị anya na Iso Christianityzọ Kraịst.
Akụkọ banyere otu n’ime mmadụ iri na ise ahụ, Jamie chọrọ nlebara anya pụrụ iche n’ihi na, n’ezoghị ọnụ, ọ na-arịọ ndị kwere ekwe na ụdị mmekpa ahụ a mere emeghị ka ekpughere ya n’ụbọchị ndị a gbasara mmetọ a n’ime ụlọ ụka na ụlọ ọrụ psyche. Mpụ ọjọọ a na-eme n'ụlọ ụka bụ mgbasa ozi kwa ụbọchị na mgbasa ozi nke 'ụra miri emi' na Chelmsford, na ọgbaghara dị na Ward 10B na Townsville, ka ga-abụrịrị onye a na-ahụ maka ya na gburugburu psycheatric: n'ezie onye, ​​ebe ọ bụla, ga-emegharị Jamie iwe .
Jamie's saga malitere mgbe ọ dị afọ 17, na njedebe nke 80, mgbe ọ gwachara ndị mụrụ ya na ya 'hụrụ nwanyị nwanyị nwanyị n'anya'. Na nzaghachi, a kpọtere ya n'otu abalị wee kpọga ya na ụlọ ọrụ psychiatric ebe, ruo ihe karịrị izu abụọ, a manyere ya 'ịnọdụ na ịsa ahụ jupụtara na ice ice mgbe a na-agụ amaokwu Baịbụl n'elu ya, na-agbanye ya n'àkwà ya n'abalị. ụra anaghịkwa ekwe m, ka nwoke gbara ya ajụjụ ọnụ ma gbaa ya arịrịọ 'na mgbe' ejidere m… ịnwe ọkụ eletrike n'akụkụ labia, na onyogho ndị a tụrụ n'uko ụlọ; a otutu ihe mgbu site na electrodes na-ekpe n'ebe maka ezi a ogologo oge mgbe e mesịrị; ekpughere na naanị '.
Akwụkwọ akụkọ La Trobe na-akatọ akụkọ a n'ụzọ ziri ezi ma na-ezo aka n'ọrụ mba ụwa megide ịta ahụhụ. Ma, olee ebe ihe akaebe akụkọ a sitere n’ezie? Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, ndị mere ihe ahụ kwesịrị ịdị na nnabata. Ọ bụrụ na Jamie ji ezi obi kwenye, mana anaghị ekwu eziokwu (dịka ọ dị na ebe a na-eche 'psycheatry psyche), ọ chọrọ enyemaka. Ọ bụrụ na gọọmentị Andrews echeghị n'eziokwu ya, ndị Victoria chọrọ enyemaka n'ihi na ọ bụ akụkụ nke arụmụka maka mgbanwe mmebe iwu.
Ewezuga ịkwalite akụkọ banyere ịdị omimi, enwere adịghị ike ndị ọzọ na akụkọ La Trobe. Nyere ndi Australia Human Rights Commission kwuputara 11% nke ndi Australia ka ha buru ndi nwanyi ‘nwanyi nwanyi nwere nmekorita nke nwoke, ndi gay, ndi nwoke na ndi nwanyi na ndi nwoke na ndi nwanyi. , 15 ndị ​​na-eme mkpesa abụghị ọnụ ọgụgụ na-eme ka mmadụ kwenye, ọkachasị na enweghị onye denominator: mmadụ ole ka enyerela aka na ịkwa iko achọghị site na ndụmọdụ 'mmụọ'? Kedu egwuregwu ha ga-eji aga ọhaneze? Ha na ndị na-agwọ ọrịa a enweghị ikike mmadụ ịga n'ihu n'ụdị ọgwụgwọ a ma ọ bụrụ na ha abụọ ekwenye?
Ọzọkwa, nhọrọ onwe onye sitere na mpaghara LGBTI guzobere abụghị onye nnọchi anya. N'ụzọ na-emegide onwe ya, nyocha banyere ahụmịhe nke nne ndị America nke ụmụ nwanyị dị afọ iri na ụma nwere Rapid Onset Gender Dysphoria, nke kwubiri na ha na-ata ahụhụ site na 'mmekọrịta na-elekọta mmadụ' ọ bụghị ọrịa na-akpata ọrịa, ndị na-eme ihe ike na-ahụ maka ndị okike, ndị mahadum jụrụ ma wepụta na weebụsaịtị maka mkpokọta 'nka na-enweghị isi' site na saịtị mgbasa ozi mmekọrịta. N'agbanyeghị nke ahụ, dabere na usoro yiri ya, ọmụmụ La Trobe bụ ihe dị mkpa maka mgbanwe mmebe iwu nke Laborlọ Ọrụ Ahụ.
Nke ikpe azu, omumu akwukwo a napuru ndi okenye na umu aka, site na nmekorita nwoke na nwoke rue transgendering. Ọ na-eleghara mmesi obi ike a na-akọkarị anya na, ka ha na-etolite, ihe fọrọ nke nta ka ụmụaka niile nwere mgbagwoju anya ga-atụgharị uche na njirimara nwoke na nwanyị nwere mmekọahụ na-enweghị enyemaka nke homonụ na ịwa ahụ, mana site na enyemaka nke ndụmọdụ ọmịiko Labour bụ ebumnuche megide machibido iwu .
Nzọụkwụ na-esote mmachibido ahụ mere na Nọvemba 2018 mgbe gọọmentị Victoria zigara mkpesa La Trobe na Kọmiti Mkpesa Ahụike Ahụike (HCCC) bụ onye kwenyere ngwa ngwa maka mkpa maka iwebata iwu nke doro anya n'ụzọ doro anya na-akatọ omume ntụgharị ma gbochie omume ntụgharị. ime na Victoria '.
Mgbe ahụ, na February 2019, gọọmentị Andrews zara ọhaneze ọmụmụ La Trobe na akụkọ HCCC na ọkwa 'ọ ga-eweta iwu iji kọwaa ma gbochie omume ntụgharị nke LGBTI'.
Enmụ amaala kpọrọ Hail Caesar.
N'ikpeazụ, n'October, 2019, gọọmentị Andrews wepụtara Akwụkwọ Mkparịta ụka nke isiokwu ya bụ "Nhọrọ Mmebe Iwu iji mejuputa mmachibido iwu nke omume ntụgharị 'iji' chọọ echiche nke obodo banyere ụzọ kachasị mma iji mejuputa mmachi nke omume ntụgharị. ' Akwụkwọ a enweghị mmasị na mkparịta ụka gbasara ma a ga-amachibido ọgwụgwọ ntụgharị: ọ na-achọ nkwenye maka ihe ọ kpebirila ịme. O yikarịrị ka ọ na-achọ azịza, dị ka nke Jamie, nke enwere ike iji maka ebumnuche ọha.
Akwụkwọ ahụ na-eche ma ọ bụrụ na ọha na eze ga-achọ igbochi ọgwụgwọ ntụgharị site na mpụ ma ọ bụ iwu obodo, ma ọ bụ abụọ. Ọ na-atụ aro mpụ ga-eziga ozi doro anya banyere adịghị anabata ụdị omume a mana ọ dọrọ aka ná ntị na ndị uwe ojii na-enyocha mmejọ mpụ, (na) usoro a enweghị ntụkwasị obi dịka ụfọdụ atụmatụ obodo na ndị mmadụ na-abịa na mkpesa '. A na-akpọ ụmụ amaala ka ha dee akara nzaghachi ha n'ime igbe mkpọda.
N'igbe ndị yiri ya, a na-arịọ ụmụ amaala ka ha nye ndụmọdụ onye 'ị chere na a ga-amachibido ịnye omume mgbanwe? Specific ọkachamara ma ọ bụ mmadụ? Ma ọ bụ onye ọ bụla nke na-enye omume ntụgharị? ' Egbula okwu, naanị tinye igbe ahụ.
Ajuju ha ‘Ole onye ka echere ka echekwana ya (site na nbughari uche ya)? Nchebe kwesiri ịbụ naanị ụmụaka na ndị na-enwe nsogbu? Nchebe ọ bụla ọ bụla ọ nwere ga-enweta? '
Ajuju, a na-ajụ ụmụ amaala ‘N’uzo dị a youaa ka i chere n’okwu nkwenye dị mkpa iji kpebie onye a ga-echebe?’ Obere ajụjụ a nwere nnukwu mkpa ọ nwere ike ịbụ na enweghị ekele maka ya: ọ metụtara ike nke Orwellian State iji nwee ike ịgabiga ihe mgbochi ndị nne na nna na-agafe na ụmụ.
Nnwale kasịnụ ebe ọ bụ na lobotomies n'ihu.
N’ọnwa Nọvemba, afọ 2019, ndị ọrụ na-ahụ maka nwoke na nwanyị n’ụlọọgwụ Melbourne bipụtara akwụkwọ ndekọ a, aha ya bụ Trans20, nke ọ na-eme kemgbe ọnwa Febụwarị 2017 ‘n’arụmụka ahụike nke trans na ụmụ ntorobịa dị iche iche’. Ọmụmụ ihe ahụ ga-ejedebe na Febụwarị 2020 site na mgbe ọ ga-abụ ụbọchị, ọ na-atụ anya ka edebanye aha ụmụ 600 buru ibu.
Gịnị mere e ji malite ọmụmụ ihe ahụ? N'ihi na, dị ka ndị dere ya si kwuo, 'usoro nlekọta ahụike maka TGD (transgender na okike dị iche iche) ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma — gụnyere iji usoro ọgwụgwọ - bụ ihe dị ọhụrụ, amalitela n'ime afọ iri abụọ gara aga. N'ihi ya, a chọkwuru ihe ọmụma banyere ọnọdụ ahụ iji kọwapụta omume kachasị mma na mpaghara ndị dị mkpa dị ka ihe egwu na ihe nchebe yana nchekwa na ogologo oge nke nsonaazụ ọgwụ. Ndị edemede kwupụtara 'a chọrọ ihe akaebe siri ike' gbasara 'akụkọ ihe mere eme nke ọdịiche dị n'etiti nwoke na nwanyị' n'ihi na 'ọ bụghị ụmụaka niile dịgasị iche iche na-etolite njirimara transgender' na akwụkwọ akụkọ na-ekwu na '45% –88% nke ụmụaka nwere nsogbu okike n'oge nwata. mara na nwoke amụrụ na nwoke na nwanyị mgbe ha toro, na-etolite etolite… na-egosi na ọ bụ naanị ụfọdụ n'ime ụmụaka a na-akọ njirimara transgender mgbe ha toro.
Ọrụ Gender ekpughere nkọwa nke usoro ọgwụgwọ ọgwụ na Ntuziaka ebipụtara na 2018, mana chịkọtara ọkwa ya na Ọmụmụ ihe ahụ. Nke mbu, ana anabata umuaka n’ime usoro ‘nkwuputa’ ha n’ebe okike di nke ha choro, megidere nmekorita nwoke na nwanyi. Nke a na-amalite site na 'mgbanwe ntụgharị nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya' nke nwere ike ịgụnye nkuchi nke edozi isi, uwe, aha na nkwupụta '.
Mgbe ahụ, nwatakịrị ahụ nwere ike ịga n'ihu na usoro ọgwụgwọ: 'Nke mbụ, ọgwụ ndị a maara dị ka GnRH analogues (' puberty blockers ') nwere ike inyere aka gbochie mmepe nke mgbanwe anụ ahụ na-enweghị isi n'oge uto, nke nwere ike ịkpalite na / ma ọ bụ ka njọ GD. Nke abuo, homonụ nke na-ekwu banyere nwoke na nwanyị, nke bụ estrogen na testosterone, nwere ike inye aka kwalite mgbanwe anụ ahụ na njiri mara okike nwata ahụ. Nke ato, a na-eme usoro ịwa ahụ, dịka ịwa ahụ na-emegagharị maka ndị transmasculine ('oke ịwa ahụ'), ka etinyere ndị nọ n'afọ iri na ụma na ụfọdụ ebe, ebe a na-adụkarị ndị mmadụ ndụmọdụ gbasara ịwa ahụ mgbe afọ ole nke ole gachara.
Edemede ahụ ekpugheghị ụlọ ọrụ dị na Victoria na-arụrụ ndị na-eto eto ọrụ Mastectom. Mana, tupu Courtlọikpe Ezinaụlọ nke Australia kpochapu ọrụ 'ọnụ ụzọ na-echekwa ya' na Disemba 2017, kọwapụtara usoro ise dị otú a: 2 n'ime ụmụ agbọghọ natal dị afọ 15, otu dị na 16, na 2 na 17 afọ. Ma edemede ahụ akọwaghị okwu ahụ 'n'ozuzu' n'ihe gbasara ịwa ahụ na akụkụ ya.
Ọmụmụ ihe ahụ ga-esochi nsonaazụ ụmụaka na-emeso homonụ na ịwa ahụ, mana ọ gaghị enye ntụnyere ụdị usoro nlekọta ọzọ. Ndị dere akwụkwọ a na-ekwu na ọ bụ 'n'usoro omume dị ka ịgbakwunye otu njikwa nlekọta na-enweghị ọgwụgwọ na njikwa ọmụmụ Trans20', na-egosi na ụdị ọgwụgwọ ọzọ adịghị, na, enweghị obi abụọ (n'ihi na ọ bụ nkwuputa na-akwụghị ụgwọ), ọdịda adaghị ọgwụ. ihe ndị mmadụ ga-eme ga-emebi onwe gị, gụnyere igbu onwe ya.
Ebe ole na ole ga-ekwusi ike na otu 'anaghị agwọ ọgwụgwọ' maka ntụle, nyocha akwụkwọ ndị mba ụwa ga-ekwusi ike ma e jiri ya tụnyere ìgwè mmadụ nke ọmịiko, mmadụ na ezinụlọ nwere, dị ka egosiri na ọ dị mma n'ọtụtụ saịtị, gụnyere Australia, n'oge gara aga..
Ọmụmụ ihe ahụ masịrị ya site na mkpesa ya na usoro iwu maka nnwale mmadụ, nke ejikọtara ya na akwụkwọ ikike dị iche iche nke ndị mmadụ na-esochi akụkọ nyocha nke 'nyocha' na Germany na Agha Secondwa nke Abụọ. Ndị ọrụ nyocha Melbourne kwupụtara na ọtụtụ ụmụaka agaghị achọ ọgwụ ha ga-enweta, ndị ọrụ nyocha ahụ ga-amata na ọgwụgwọ ọgwụ na-emetụta, ha kwetara na ha amaghị ma ọ ga - arụ ọrụ, ma ọ bụ mmetụta ndị nwere ike ịpụta, mana, afọ ole na ole , ha chere na ha nwere ike rụchaa ya, na-echeghị usoro ndị ọzọ, na nke ọ bụla, gọọmentị na-akwado ha ga-amachibido. Ajụjụ a bụ, kedu ka ndị Royal Royal Hospital dị na Melbourne si nweta nkwanye ugwu dị otú a? Ekwesịrị ịme ka ọhaneze kọmitii usoro ọrụ ya. Willnye ga-aza akwụkwọ?
Dị ka ọ na-adịkarị, a ga-emezu ọtụtụ ọnọdụ tupu a nwaa nnwale dị ndụ na Australia, ọbụlagodi oke oke, hapụ ụmụaka. A ga-enwerịrị ohere ọmụmụ, ebumnuche a na-anabata, ịkwado nyocha nke akwụkwọ, ihe nyocha ụlọ nyocha, na-akwado ahụmịhe mmadụ, ọrụ ụgbọelu, njikwa mmadụ, ntinye anya, nyocha site na nyocha na-enweghị mmasị, nkọwapụta zuru oke nke mmetụta ndị ọ ga-esite na ya pụta nkwenye, na ohere ịdọrọ n’oge ọ bụla.
Trans20 na-akpasu iwe na ihe niile. Ọnọdụ ọ na-enyocha enweghị bious Posusibility. Enweghi nnwale ọbara, Xray, nyocha nke mkpụrụ ndụ wdg iji tụọ ihe ndabere maka ọrịa nke ugbua nke dysphoria nwata: ọrịa ahụ gosipụtara atụmatụ nke nsogbu ọrịa na-efe efe nke ụmụaka nwere ọgụgụ isi na ụfọdụ ndị nne na nna. Ọbụna ndị dere ọmụmụ a kwenyere na 'Ọrịa mgbaka siri ike bụ ihe a na-ahụkarị, na ọnụego nke ịda mbà n'obi onwe onye na-achọpụta na nhụsianya transgender na nwoke na nwanyị (TGD) na-eto eto na Australia dị ka 75% na 72%, n'otu n'otu, na 80 % na-akọ akụkọ ịchọrọ onwe ya na 48% na-anwa igbu onwe ya. Ndị dere akwụkwọ ahụ ekwughị banyere Autism, nke bụ ihe jikọrọ co-morbidity n'ọtụtụ nyocha mba ụwa, amaara ya maka nghọtahie ya.
Ndị na-akwado maka itinye aka na mmiri ọgwụ na-echekwa nsogbu ọrịa uche na-akpata site na mmegbu mmadụ. Ha na-agọnahụ nkọwa doro anya ọ nwere, na mgbagwoju anya nke nwoke na nwanyị bụ ihe mgbaàmà nke abụọ nke nsogbu na-akpata ọrịa. Ndị na-akwado ya na-arụ ụka na ọ dị mkpa maka enyemaka ahụike iji gbochie igbu onwe ya mana enweghị ihe akaebe, kwa se, na dysphoria nwoke na-eduga na igbu onwe. O doro anya na ụmụaka nwere mgbagwoju anya na-achọ nchebe n'ihi na nsogbu ahụike uche ha niile metụtara na mmekpa ahụ ezinụlọ nwere njikọ na mmerụ ahụ nke ukwuu. N'iburu n'uche ọtụtụ ndị tozuru etozu igbu onwe ha, dị ka a tụlere n'okpuru, ụzọ kachasị mma iji belata ọnụ ọgụgụ ụmụaka na-egbu onwe ha nwere ike ịkwụsị ịkwụsị ha.
Nsogbu uche nke ndị nne na nna gụnyere nsogbu gbasara omume na esemokwu di na nwunye. Otu nnyocha a ma ama na West Australia hụrụ mmekọrịta symbiotic nke ọrịa n'etiti nne na-enweghị obi ụtọ na ụmụ nwoke na-eto eto. Ndị nwoke emegbuola ndị nne, hụ nwata ha ka ọ na-adọrọ adọrọ karịa na uwe, bụ onye chọpụtara ngwa ngwa na ime ya ga-ewetara ya ihu ọchị. Thesebọchị ndị a, dysphoria okike dịkarịsịrị etolite n'ụmụaka ụmụ agbọghọ na-eto eto nwere nsogbu, ndị nne na nna wụrụ akpata oyi n’arụ nwa ha nwanyị.
Nlekọta homonụ na ịwa ahụ nke nsogbu akparamaagwa enweghị ikike, yana ọmụmụ ahụ enweghị ebumnuche a na-anabata nke ọma: ọ bụghị dissimilar aghara nke anorexia nervosa nke mmetụta na-agbanye na eziokwu ahụ adịghị enweta ọgwụgwọ 'nkwupụta'. Ahụike ahụike agbanwebeghị ka o kwekọọ n'uche a obi erughị ala, ọ kwesịghị ka ọ dịrị ụmụaka na-enwe mgbagwoju anya na okike.
Nyochaa akwụkwọ a ga-adụ ndị na-eme nchọpụta banyere ụkọ nsogbu mbụ ahụ, nke ọgwụgwọ na-aga nke ọma site na psychotherapy, maka ọrụ physiological zuru ebe niile nke hormone ha chọrọ 'igbochi', nke nsonaazụ nke ihe mgbochi ahụ, na nsonaazụ ndị a. ụbụrụ nke homonụ nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ, na-enweghị ihe akaebe maka nsonaazụ dị mma dị ka ekpughere ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke 'ndị na-apụnara mmadụ ihe' na ọnụ ọgụgụ dị elu nke igbu onwe onye mgbe transgendering ndị okenye.
Ọjụjụ nke njikwa njide aka n'ọmụmụ ihe ahụ, yana nyocha metụtara nsonaazụ site n'aka ndị na - ede akwụkwọ na - anaghị ele ya anya, nke chọrọ ịhụ ihe ọma n'ọrụ ha, bụ ezigbo ihe atụ nke 'onye na - ahụ ihe na - ele ihe anya.' Na ndị dere kwupụtara na ha enweghị esemokwu nke mmasị n'ọmụmụ ihe a ka a na-agbagha site na ịdabere nke aha, ibi ndụ na nchedo iwu na ọdịmma nke nsonaazụ a chọrọ.
Ekwesiri imata nkọwa ụfọdụ nke ndị na-egbochi, homonụ mmekọahụ na ịwa ahụ.
Ọ dị mkpa ileba anya nke ọma na nsonaazụ nke 'nwoke na nwanyị etolite etolite na homonụ mmekọahụ n'ihi na iji ha bụ ihe dị mkpa na ntinye ọgwụ na nwata dysphoria nwata mana ọ na-akpasu ụkpụrụ omume, ọkachasị n'ihi na ndị na-akwado ndị na-elekọta mmetụta nke ndị na - egbochi' enweghị nchebe na kpamkpam. ntụgharị 'mgbe ha na-anọghị, ma gbachi nkịtị na mmetụta ụbụrụ nke homonụ na-enwe mmekọrịta nwoke na nwanyị.
Oge mgbanwe a ka Gonadotrophic Releasing Hormone (GnRH) wepụtara site na hypothalamus ka ọ mee ka akwara ahụ dị nso iji tọhapụ Gonadotrophic Hormones n'ime iyi ọbara iji mee ka ha too uto nke gonads ndị dị anya na ntọhapụ nke homonụ mmekọahụ ha, testosterone na estrogen, nke na-akpali nke abụọ agwa. Mkpesa kwa ọnwa nke mgbakwunye GnRH na-egbochi pituitary ịhapụ Gonadotrophins, na-eme ka oge ntozu.
Enwere ike ịlekọta analogues ahụ na mmalite nke mmalite nke ntozu nwoke: ihe nhọpụta mbụ ha maara n'Australia bụ nwa nwoke natal gbara afọ 10½. Ndị na-akwado akwụkwọ na-ekwu na ọ na-egbu oge ito eto na-enyekwu nwa oge ịtụgharị uche na nwoke na nwanyị na ọdịnihu ya. Ha na-ekwukwa na ọ na-ezere ihe ‘achọghị’ nke mmekọahụ a jụrụ ajụ, ma na-eme ka ịwa ahụ n’ọdịnihu: nwa ara na-adị mfe iwepụ karịa akụkụ ahụ mepụtara (mana scrotum nke na-ezighi ezi nwere ike inye anụ ahụ ezughi oke maka ịmepụta ersatz vagina, na-achọ ntughari nke ogologo nke eriri afọ iji mee ka mmekọrịta nnabata).
Ọrụ GnRH, agbanyeghị na oke kwụ ọtọ sitere na hypothalamus ruo gonads. GnRH nwere mmetụta 'kwụ ọtọ' n'akụkụ akụkụ ụbụrụ ndị ọzọ, yana, ikekwe, oke ọrụ iji nọgide na-eguzosi ike n'ezi ihe nke mkpụrụ ndụ akwara, ọbụlagodi eriri afọ.
Otu ihe di nkpa banyere njirimara nwoke na nwanyi bu oru nke GnRH n'usoro limbic, yana ebe nmekorita nwoke n’etiti ụbụrụ. Usoro limbic na - ahazi mmetụta, cognition, ebe nchekwa na ụgwọ ọrụ n'ụdị ele ụwa n'ime, gụnyere njirimara, nke 'ọrụ isi' na-achụ site na ebumnuche, omume na mkpebi.
Achọpụtala ọrụ ụbụrụ dị otú ahụ na ndị okenye na-ahụ maka ihe mgbochi iji belata nsonaazụ nke homonụ mmekọahụ, dịka ọmụmaatụ, nke testosterone na-akpali ọrịa prostate, ma ọ bụ estrogen na-akpali endometriosis na ụmụ nwanyị. N’ezie, ndị na-atụkọ uche na nyocha banyere mmetụta nke igbochi GnRH na ọnọdụ ndị ahụ gụnyere afọ, ọrịa na ọgwụgwọ, yana nkwụsị nke mmetụta mbụ nke homonụ mmekọahụ na ụbụrụ, mana enweghị ike ịpụpụ otu mmetụta GnRH na-egbochi.
Nchoputa di otua gosiputara na ulo oru anumanu na Glasgow na ulo oru ihe omimi nke Oslo. N’ihi na aturu n’enweghi nkpa, achoputara ihe neme ka ihe nmebi agha ghara idi ire, ihe jikọtara ya na otutu otutu ihe ndi oseturu ya, nke a mere ka odi n’ike n’ike nke ike ma nwekwuo ike mmetuta obi.
Pfaff et al gosiputara otu ọrụ nke GnRH na ebe a na-eme ka mmekọahụ na etiti ụbụrụ n’afọ ndị 1970. Oke oke, ụmụ oke na-emeghachi omume na omume mmekọrịta nwoke na nwanyị: nwanyị nke nwanyị tozuru oke na-akwado ịkwado ya, ma nwoke ga-amanye ya.
Enwere ike iju ya anya ma nwa obula nke 10 ½ nwere ikike itule nke njikota nwoke na nwoke, mana karie mgbe a na-emezi nmekorita site na nkwụsị nke isi n’etiti agwo, ya na ihe nke abuo nke homonu nwoke na nwoke na nmekorita nwoke na nwanyi. jikọtara usoro limbic. Ọ bụghị ihe ịtụnanya na-ekwu na nwatakịrị dị otú ahụ nwere ike ime mkpebi tozuru oke nke ịdị ukwuu dị otú ahụ. Ọ bụghị ihe ziri ezi na mmadụ nwere ike ime mkpebi ahụ maka ya.
Ihe omumu ihe omuma ndi ozo nke chochi GnRH ekwesiri ikwuputa: ndi a ewechiri umu nwoke tozuru oke na etinye aka na nmekorita nke ihe ndi n’aru ocha, ana - ejikọ ya na obere ọrụ. A na - ejikọ ndị nwere ụmụ nwanyị nwere endometriosis na nsogbu eriri afọ na mbelata 50% na mkpụrụ ndụ akwara, na - atụ aro ọrụ dị ukwuu maka GnRH n'ịkwado ahụike neuronal.
Ethkpụrụ omume ọgwụgwọ ọdịnala chọrọ ka ekpughere ya ihe niile ọ bụla ọ nwere ike ịkpata: ga - eme ka Courtlọikpe dị elu nke Australia, nke, na Rogers vs Whittaker, kpebiri na a ga - ekwuputara onye ọrịa na - atụle ọgwụgwọ na, site na ntinye, itinye aka na nyocha.
Ọ bụ ezie na ndị na-akwado maka iji ihe mgbochi na 'nkwupụta' na-ezo aka na nsogbu nke uto ọkpụkpụ, ọ nweghị ihe akaebe nke mkparịta ụka nke mmetụta na sistemụ akwara na akụkụ ahụ. Enwere naanị mmesi obi ike maka nchekwa na iweghachị azụ.
Gbaa mmiri homonụ mmekọahụ.
Ojiji nke homonụ ndị a iji kpalite njirimara mmekọahụ nke agụụ mmekọahụ a na-egbu ga-egbu oge ruo afọ 16, ma ụkpụrụ nduzi Melbourne enweghị ndụmọdụ dị otú ahụ na homonụ ndị a na-enye ugbu a na mbụ, dabere n'otu arụmọrụ.
Mmepe nke nwa gbagwojuru anya na-egbochi ndị mgbochi ka ndị ọgbọ ya na-etolite n'obodo na-etolite na njiri mmekọahụ nke abụọ. Ya mere, Jimmy kwenyere na ọ bụ nwa nwanyị, nkwenye nke ndị isi ikike gbakwunyere, gụnyere ndị ọrụ nke Okike Ndị Mmekọ. Ma ụmụ nwanyị ndị ọgbọ ya na-akpa àgwà dị ka ụmụ agbọghọ na-eto eto ma na-azụlite ara. Ọ bụ ihe ọjọ ịhapụ inye estrogen iji nyere ya aka 'ịkwụsi ike.
Ọ bụ ezie na ndị na-akwado nkwanye ugwu na-ekwupụta ụdọ ọkpụkpụ na akwara obi nke homonụ nwoke na nwanyị inwe mmekọahụ, enweghị akaebe ha na-enye ihe omuma banyere mmetụta homonụ ndị a na ụbụrụ. Mana, Holshoff Pol et al egosila na ụbụrụ ụmụ nwoke a na - ahụ maka ịbe ugwu ugboro iri karịa ịka nká mgbe naanị ọnwa anọ gachara. Thebụrụ nwanyị na testosterone hypertrophies. Yabụ, mmetụta nke homonụ na-enwe mmekọahụ na ụbụrụ na-eto eto, nke ahapụrụ tupu ọmụmụ nwa n'ụzọ echere iji mee ka mmegharị site na homonụ kwesịrị ekwesị na oge mgbanwe, enwere ike ịtụle dị ka ihe na-emetụta mmadụ, ọkachasị mgbe ọ gara n'ihu na ndụ. O bu ihe doro anya icho iche.
Enweghị ihe akaebe na-akwado maka nkwenye homonụ bulitere okwu ndị a na ụmụ na ndị na-ahụ maka mgbagwoju anya, ha kwesịrị, ikekwe karịsịa n'ọnọdụ nke oke ọnụọgụ igbu onwe ya na ndị okenye transgengen. Ndị na-akwado akwụkwọ na-arụ ụka na ọnụego bụ n'ihi ostracism, ọbụlagodi na-esite n'ọmụmụ ihe gbasara ọrịa na ịnakwere ndị otu Europe. Ọ baghị uru ịtụgharị uche ma ọnụọgụ ahụ gosipụtara enweghị ọla edo n'ụkwụ nke egwuru egwu egwurugwu, kamakwa ịtụgharị uche na nhazigharị na arụmọrụ nke nkwụsị nke homonụ nke cerebrum na-ebute ụdị ọgba aghara nke usoro ọgụgụ isi nke na a na-eleba ọnwụ anya karịa. mma karịa ndụ.
Amabeghị etu esi ekpughere ndị ọzọ ọrụ ịwa ahụ ga-eme ma mmerụ ahụ a ma ama na-enye mmesi obi ike na-enweghị isi. Iji maa atụ, akowara mastectomies dịka 'agbanweegharị' dịka a ga - ebelata ọrụ nke nwanyị ara ka ọ bụrụ ihe eji achọ mma eji dochie anya ihe eji arụ sịntetik. Na, castration ka akowara dika ‘ikike omumu n’ibelata’ nke enwere ike igbochi ya site na ichekwa ndu bioads ma obu ekpomoku: usoro nke eji ego ya n’aka, na nke, odi ka edoghi ya, onu ogugu n’aru imu nwa.
Gịnị bụ ọrụ nlekọta?
N'ịbụ onye nwere nwatakịrị na ndị nne na nna nwere mgbagwoju anya, olee ọrụ ọrụ nlekọta nke dibịa ma ọ bụ onye nkuzi? Ọ bụrụ na ezigara nwatakịrị ahụ na ụlọ ọgwụ okike nke na-eme ịwa ahụ na ịwa ahụ, enwere nnabata oke aka na nnwale metụtara nnabata oke na uche na ahụ ụmụaka: otu ihe a na - agaghị emeli, na - enweghị isi, yana ọtụtụ mmetụta, gaa akwụkwọ mba niile.
Anaghị anabata ngọpụ nke sitere na Nazi Germany, na 'gọọmentị mere m ka m mee ya', anaghị anakwere dị ka nke ziri ezi. N'agbanyeghị nke ahụ, ọrụ ahụ bụ ihe gọọmentị Andrews na-ekpebisi ike imebi ụmụ amaala ya. Na ihe mgbu nke ndi nkịtị na, ikekwe, mmachi ndị omekome, ndị na-elekọta ya na ndị nkuzi ụmụaka nwere mgbagwoju anya ga-etinyere ha itinye 'nkwupụta'.
Nyere na imirikiti ụmụaka nwere mgbagwoju anya ga-alaghachi na mmekọahụ nke nwoke na-enweghị ọgwụgwọ 'nkwupụta', n'ezie enwere nnukwu 'Ọrụ Nlekọta' iji zere nnwale ahụ. Achọrọ ụdị mkpọsa ahụ na Victoria.
 Ms Hennessy. Ọgụgụ akwụkwọ ọgụgụ maka ahụike. Ndị omeiwu Victoria. Hansard. Febrụwarị 10, 2016.
 Jones T, Brown A, Carnie L et al. Na - egbochi mmerụ ahụ, na - akwalite ikpe ziri ezi. Zaghachi na usoro ọgwụgwọ LGBT na Australia. Melbourne: GLHV @ ARCHS na Centerlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihe Ruuru Mmadụ, 2018.
 Ibid peeji nke 9.
 Littman L. Rapid bidoro dysphoria okike ntorobịa na ndị ntorobịa: Nnyocha gbasara akụkọ nne na nna. PLoS ONE 13 (8): e0202330. https://doi.org/10.1371/journal.pone.
 Nyocha zuru ezu banyere ihe ịga nke ọma nke ọgwụgwọ na-abụghị hormonal (yana ntụnyere kwesịrị ekwesị) apụtawo na Quadrant, Machị 2019, n'isiokwu isiokwu Nchigharị Na Childrenmụaka Di na Dysphoric.
 Pfaff D, Luteinising hormone na-ewepụta ihe nwere ike nke akpụrụ akpụ agwa akwara na oke ụmụ oke nke hypophysectomised ovariectomised ụmụ nwanyị. Sayensị. 1973. 182: 1148-1149.
 Hulshoff Pol, HE, Cohen-Kettenis, PT, Van Haren, NE, et al. Nginggbanwe mmekọahụ gị na-agbanwe ụbụrụ gị: Mmetụta nke testosterone na estrogen na usoro ụbụrụ mmadụ tozuru etozu. Akwụkwọ akụkọ European Journal of Endocrinology. (2006). 155: S107 – S111.